MyanCare | ပိုးတော့ပိုးပဲ။ ဘတ်တီးရီးယားလား?? ဗိုင်းရစ်(စ်)လား ??
ပိုးတော့ပိုးပဲ။ ဘတ်တီးရီးယားလား ?? ဗိုင်းရစ်(စ်)လား ??
ပိုးတော့ပိုးပဲ။ ဘတ်တီးရီးယားလား?? ဗိုင်းရစ်(စ်)လား ??
ဖျားတယ်၊နာတယ်၊ နာမကျန်းဖြစ်ကြတယ်။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းပြတော့ ပိုးဝင်တယ်ပြောတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဆေးရုံပါတက်ရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ဆေးလေးသောက်ပြီး တစ်ပတ်လောက်ဆို ပျောက်တယ်။ ပိုးဝင်တယ်ဆိုတော့ ဘတ်တီးရီးယားလား ? ဗိုင်းရစ်(စ်)လား ?? ပိုးနှစ်ခုလုံးကတူတူပဲလား ?
ကူးစက်ရောဂါအများစုက ရဲ့ အကြောင်းရင်းက ရောဂါပိုးပါ။ ဘတ်တီးရီးယားရော၊ ဗိုင်းရစ်(စ်) ရော နှစ်ခုလုံး ရောဂါပိုး ပါပဲ။ ပိုးနှစ်ခုလုံးက တူတာကတော့ လူရဲ့ သာမန်မျက်စိနဲ့ ဘယ်လိုမှ မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ မမြင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ရောဂါပိုးတစ်ခု ကူးစက်ပြန့်နှံ့ တဲ့အခါ လူတစ်ယောက်ကနေ နောက်တစ်ယောက်ကို မသိလိုက်ဘဲ အလွယ်တကူ ကူးစက်တာတွေ အလွယ်တကူဖြစ်ပါတယ်။
ဘတ်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရစ်(စ်) ဘာကွာသလဲ ???
ပြင်ပမှာ ရှင်သန်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိ ကွာပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ဘတ်တီးရီးယားပိုးဟာ ပြင်ပလေထုမှာ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်တစ်လုံးနဲ့ သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင် စနစ်ရှိပြီး ပြင်ပလေထုမှာလည်း ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘတ်တီးရီးယားပိုး ဟာ မြေကြီး၊ ရေအိုင်၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ် နေရာအနှံ့မှာရှိပါတယ်။ လူကို ရောဂါဝေဒနာဖြစ်စေတဲ့ ဘတ်တီးရီးယား တွေ ရှိသလို့ တချို့ ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားပိုး တွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဗိုင်းရစ်(စ်)ပိုးကတော့ သူ့ဘာသာသူ မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ ပိုးကို သယ်ဆောင်ပေးမယ့် လက်ခံကောင် တစ်ခုခု (ဥပမာ- လူ၊တိရစ္ဆာန်)ရဲ့ ဆဲလ်ထဲမှာပဲ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်ပကို ရောက်တဲ့အခါ အချိန်ခဏနဲ့ သေသွားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရှင်သန်ဖို့ဆိုတာ သက်ရှိဆဲလ်တစ်ခုခုလိုပါတယ်။
ဘတ်တီးရီးယားကို ဗိုင်းရစ်(စ်)နဲ့ အရွယ်အစားယှဉ်ရင် ဘတ်တီးရီးယားက အင်မတန်ပိုကြီးတယ် လို့ ပြောလို့တောင်ရပါတယ်။ အသေးဆုံးဘတ်တီးရီးယားရဲ့ အရွယ်က ၀.၄ မိုက်ကရွန် ( တစ်မိုက်ကရွန်ဆိုတာ တစ်မီတာရဲ့ တစ်သန်းပုံ တစ်ပုံ) ရှိပါတယ်။
ဘတ်တီးရီးယာလည်း သေးတယ် ပြောရပေမယ့် သာမန် မျက်စိနဲ့ မမြင်ရပေမယ့် မိုက်ကရိုစကုတ်နဲ့ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဗိုင်းရစ်(စ်)အများစုကတော့ ၀.၂ နဲ့ ၀.၂၅ မိုင်ကရွန်လောက်ပဲ ရှိတဲ့အတွက် တော်တော်များများကို ရိုးရိုး မိုက်ကရိုစကုတ်နဲ့ ကြည့်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဗိုင်းရစ်(စ်)တွေကို ကြည့်ရင်လေ့လာရင် Electron Microscope ကို သုံးကြရပါတယ်။ ပိုပြီး အဆများစွာချဲ့နိုင်တဲ့ အတွက်ပါ။
ဘတ်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရစ်(စ်) တို့ဟာ ရှင်သန်ရတဲ့ပုံ မတူတဲ့အခါ ကူးစက်ပြန့်နှံပုံလည်း မတူပါဘူး။ ဗိုင်းရစ်(စ်)ပိုးက ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်ထဲ ဝင်ပြီး အရေအတွက် ထောင်ပေါင်းများစွာ ပွားပါတယ်။ နောက်တော့ အဲ့ဒီဆဲ့လ်ကနေ ထွက်ပြီး တခြားဆဲလ်တွေကို ကူးစက်ပြန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် များသောအားဖြင့် ဗိုင်းရစ်(စ်)ပိုးကူးရင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ရာသီတုပ်ကွေး (influenza), ဝက်သက်ရောဂါ( Measle), ပိုလီယိုရောဂါ(Polio), COVID-19 စတာတွေက ဗိုင်းရစ်(စ်)ပိုးဝင် ကူးစက်ခံရတဲ့အတွက် ရောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။
လူကို ရောဂါပေးတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားတွေကတော့ ရောဂါပိုးကူးစက်ပြီး ပြန်နှံ့ရင် လူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ကိုမဟုတ်ဘဲ သူအားသန်ရာနေရာကိုပဲ ဒုက္ခပေးတတ်တာရှိပါတယ်။
ဘတ်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ရောဂါဖြစ်ကြရတာ သူကိုယ်တိုင်ကြောင့် ဖြစ်ချင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် သူက စွန့်ထုတ်တဲ့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဒုက္ခပေးတဲ့ အဆိပ်တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နမိုးနီးယား( Pneumonia), TB(Tuberculosis)နဲ့ အစာဆိပ်သင့်တာတွေက ဘတ်တီးရီးယား ဒါမှမဟုတ် သူရဲ့အဆိပ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုင်းရစ်(စ်) နဲ့ ဘတ်တီးရီးယား
နောက်တစ်ခု စိတ်ဝင်စားစရာက ဗိုင်းရစ်(စ်)ပိုးတွေဟာ ဘတ်တီးရီးယား ပိုးတွေကို ရောဂါပိုးကူးစက်စေပါတယ်။
ဘတ်တီးရီးယားပိုးကို သတ်နိုင်တဲ့ဆေးအမြောက်အမြားရှိပေမယ့် ဗိုင်းရစ်(စ်)ကို သတ်တဲ့ ဆေးဟာ ဘတ်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးထက်နည်းပါသေးတယ်။ ကုရာနိထ္ထိ လို့ ပြောနေရတဲ့ HIV ကလည်း ဗိုင်းရစ်(စ်) ကြောင့်ပါပဲ။
ဖြစ်ပွားတတ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ (အပိုင်း ၁)